MegaTV Player iji kirie ọwa akwụ ụgwọ si n'akụkụ ụwa niile | Gam akporosis
José Alfocea | | Ngwa gam akporo, gụgharia, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Ị chọrọ lelee ugwo ugwo n'efu? N'ihi nrụrụ aka nke Wiseplayer na-ata ahụhụ n'ihe gbasara mgbasa ozi egwuregwu bọọlụ, taa achọrọ m iweta ma kwado ngwa ọzọ, nke anyị ga-eji enwe ike ilele ugwo TV n’efu, gụnyere ọwa bọọlụ ma ọ bụ akwụ ụgwọ ọwa egwuregwu ma ọ bụ ndenye aha
Ngwa a na-ekwu maka ya abụghị naanị ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi dị mfe anyị nwere ike ịchọta n'efu na Playlọ Ahịa Google Play, ngwa ngwa ngwa ngwa maka gam akporo, n'okpuru aha MegaTV Onye ọkpụkpọ. Ọzọ anyị na-egosi gị, dị ka anyị na-egosi gị na vidiyo a jikọtara na isi nke post a, ọrụ dị mfe nke ngwa ahụ yana ọ dị mfe usoro nhazi iji nwee ike ilele TV niile akwụ ụgwọ n'efu ozugbo na mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Etu m si agwa gị na vidiyo etinyere na nkụnye eji isi mee nke post a, a na m egosikwa gị etu ngwa ahụ si arụ ọrụ MegaTV Player ikiri ụgwọ TV n'efu site na mkpanaka gam akporo anyị, ngwa ahụ dị mfe iji dị ka ịgbakwunye Uche Nwoke na akụkụ na-ajụ anyị URL nke Play List iji mụta nwa.
Na nke a dị mfe nke itinye Uche Nwoke a ga-ebo anyị ebubo anyị nnukwu ndepụta nke ịkwụ ụgwọ ọwa nke ọma ịhazi dị ka Egwuregwu, Ihe Nlere TV, Ihe nkiri na usoro, Egwu, Childrenmụaka, sayensị na ọdịbendị ma ọ bụ nke ndị isi Latin America dị ka Mexico, Argentina, Chile ma ọ bụ Colombia dị n'etiti ndị ọzọ na, kedu ka ọ ga - esi bụrụ ụzọ ọzọ, ọwa izugbe na Mepee site na Spain.
Na ndepụta nke ugwo ọwa n'elu MegaTV Onye ọkpụkpọ, na mgbakwunye na inye anyị ohere ndị a niile m gwara gị n'elu, a na-enyekwa anyị ohere ndị ọzọ na-atọ ụtọ dịka ịnweta usoro Adịchaala ọwa, nke dokwara n'efu na-enweghị mkpa ndenye aha, anyị ga-enwe ike ịnweta nanị ọdịnaya maka ndị okenye.
Ọzọ na-akpali nhọrọ bụ ndepụta nke ọwa na-gosiri na edemede taabụ, nri na njedebe n'okpuru aha nke Ọwa BETA. Site na ndepụta a nke ọwa BETA anyị ga-enwe ohere ịkwụ ụgwọ ọwa na ndepụta okwu Spanish, kwụọ ụgwọ ọwa site na udi nke Boomerang, Nchọpụta, Network Cartoon, Comedy Central o Nickelodeon n'etiti ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ị ga-atụle.
Maka ihe a niile na ọtụtụ ndị ọzọ, ana m enye gị ndụmọdụ ka ịnwale MegaTV Player na ngwụcha gam akporo gị, yana mgbakwunye -enwe ike ilele bọọlụ n’efu n’efu na ọwa akwụ ụgwọ kacha mmaAlso ga-enwe ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ọwa na-efu ma ọ bụ anaghị etinye dị ka ọkọlọtọ na ngwa ndị ọzọ nke ụdị.
1 Budata MegaTV Player n'efu na Playlọ Ahịa Google
2 Ngwa ndị ọzọ iji lelee ọwa akwụ ụgwọ n'efu
2.1 TV TV Player
2.2 Gbapụ TV Player
2.5 Ntaneti TV na ntanetị
Budata MegaTV Player n'efu na Playlọ Ahịa Google
Mmelite: Ọ bụrụ na MegaTV Player adịghịzi, gbalịa ibudata ihe ọzọ a ngwa iji lee TV na-akwụ ụgwọ n'efu.
Ngwa ndị ọzọ iji lelee ọwa akwụ ụgwọ n'efu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata ngwa ndị ọzọ iji lelee ọwa ndị akwụ ụgwọ n'efu, n'okpuru anyị na-enye gị ụzọ ole na ole ọzọ na MegaTV Player. Anyị nwere olile anya na ị masịrị ha:
Otu n'ime ihe ndị ọzọ kachasị mma iji lelee ọwa nke akwụ ụgwọ n'efu na ekwentị ama gam akporo gị TV TV Player, ngwa dị ukwuu nke APK ya (41,67 MB) enwere ike ibudata na ebe a. N'ihi ngwa a ị nwere ike igwu vidiyo ma ọ bụ vidiyo ọ bụla ịchekwara na ngwaọrụ gị, kamakwa ị ga-enwe ohere a otutu TV ọwa na Spain, nke gunyere otutu ọwa di na Movistar +.
Gbapụ TV Player
Ọ bụrụ na ọ bụla izu ụka ị na-enwe mara mma egwuregwu dị ka onye ọ bụla ọzọ na-eche na agba nke gị otu na-agba ọsọ site na gị veins, mgbe ahụ Gbapụ TV Player bụ ngwa ị chọrọ n’ihi na ọ bụ ya kacha eji ngwa maka lelee bọọlụ n'efu na HD, mana ị ga - enwe ike ịba ọtụtụ ọwa mba na mpaghara ma kwụọ ụgwọ TV n’efu. Ọ na-arụ ọrụ site na ndepụta w3u ekele nke ị nwere ike ịlele ọwa niile ịchọrọ site na mba ụwa ịchọrọ. Nwere ike ibudata ngwa nke SPLive TV Player ebe a.
Ngwa ọzọ ga - enyere gị aka ilele ọwa akwụ ụgwọ n'efu na ama ama gị Mobdro, otu n'ime ngwa ndị eji ewu ewu ma jiri. Ekele a na ngwa a ị ga-enweta a ndepụta ego maka anya tụlee na kacha nso gị ahịa ọgwụ n'ihi na ị ga-enwe ike ịkwụsị ụtọ na-enweghị nkwụsị gụgharia ọdịnaya: ọwa ndị a na-ekwu okwu ya, ihe omume egwuregwu ndị bụ isi, ọwa telivishọn ọdịnala na ọtụtụ ndị ọzọ, ma Spanish ma ndị mba ọzọ, yabụ ị nwere ike ịmụ asụsụ. Mobdro bụ ngwa ọwa TV pasent narị, ya bụ, ebe a ka ị họpụtara ọwa ị chọrọ ile, dịka na TV, ka mmemme na-akpọ. Nwere ike ibudata Mobdro APK ebe a.
Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo onye ofufe nke ihe nkiri isiokwu ha, mana usoro ọdịnala nke ịgbaso mmemme na-agwụ gị ike, yana RepelisPlus ị nwere ike lee usoro niile, ihe nkiri na ihe nkiri ịchọrọ maka n'efu, na-enweghị ichere maka oge a kapịrị ọnụ ịbata. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịlele ha na nkwanye ma ọ bụ budata ọdịnaya dị na ekwentị gị iji lelee ha ebe ọ bụla na-enweghị njikọ. RepelisPlus Ọ bụghị ngwa iji lelee ụgwọ TV na-akwụ ụgwọ n'efu, mana ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma na arụmọrụ kacha mma na ụdị ya. Echefula ya. Cannwere ike ibudata ngwa maka n'efu Ebe a.
Ntaneti TV na ntanetị
Ọ bụrụ na ị ka tụlere na ịnweghị oke ndị ọzọ iji lelee ọwa TV na - akwụghị ụgwọ, usoro, ihe nkiri na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na gam akporo gị, anyị ga - eji ụzọ ọzọ ndị ọzọ Ntaneti ntanetị Punga N'efu bụ ngwa nke ị nwere ike lelee ọwa Spanish na Latin America n'efu, na nke a gụnyere ihe niile bọọlụ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọwa Movistar gbakwunyere na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ezie, cheta na iji ngwa a, ị ga-achọ ịnweta ụdị ọkpụkpọ VLC nke etinyere na ọnụ gị ma ọ bụ, ma ọ bụghị, ọ gaghị arụ ọrụ. Nwere ike ibudata Ntaneti ntanetị Punga N'efu free ebe a.
Ngwa kachasị mma ile Megadede na TV TV gị dị ka a ga - asị na ọ bụ gam akporo TV
Kwekọrọ n'Ozizi na ma gam akporo ama na mbadamba, MXL IPTV bụ ikekwe kasị mma ngwa na-ekiri ụgwọ TV ọwa n'efu na gụgharia, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na nke ahụ bụ ihe ọtụtụ n'ime ya ọrụ na-eche. Nke kachasị mma bụ na achọtara ya dị na Storelọ Ahịa Play, yabụ na ị gaghị eji ngwa ọzọ ma ọ bụ tinye ihe egwu ọ bụla.
MXL IPTV bụ dabere na ndepụta M3U na m3u8 ọwa na ị nwere ike bulite ma mpaghara gị ma nke dịpụrụ adịpụ, dakọtara na usoro vidiyo dị ugbu a na-asọ asọ.
Ke adianade do, ọ bụ nnọọ mfe iji Ọ dị mma, ịnwere ike ịchọpụta ndepụta M3U na ekwentị gị ma tinye ha ngwa ngwa na ngwa ngwa na MXL IPTV, nke na-enyekwa ọtụtụ uru ndị ọzọ. Ọ bụ kpam kpam free n'ihi ya, ihe na-eche na ya na-agba ọsọ?
You maara ngwa ndị ọzọ maka lelee ugwo ugwo n'efu? Olileanya na Wiseplay eserese egwuregwu gaa n'ihu rụọ ọrụ ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Hụ ọwa akwụ ụgwọ n'efu
Nke a ga-abụkwa otu ihe ahụ dịka Wiseplay
Zaghachi Isaac Sainz
Megatv na ị na - egwu ọkpụkpọ bụ naanị ndị m ma, ọ dị onye nwere ike ịkwado ọzọ?
Zaghachi Abisai Castillo
Eduardo Rojas kwuru dijo
Obu ihe nzuzu, egbula oge gi na nbudata ya, echere m na umu okoro a na enye gi ego iji kwalite udiri a
Zaghachi Eduardo Rojas
Tụlee, ọ bụ naanị nkwanye. Onaghi enye inye mmadu mkpari. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ngwa yiri nke ahụ nke anaghị ebute gị nsogbu, kwụọ ụgwọ maka ya. Chọrọ ile TV na okpu, na ngwa efu ma ị ka na-ewe iwe ... hahaha. Daalụ!
Daalụ nke ukwuu ekele unu !!
Zaghachi José Maldonado
Ngwa ahụ adịghị njọ, kama Wiseplay ka njọ kwa ụbọchị, ihe kachasị mma na enweghị mgbagha bụ Free Direct S
Zaghachi Terry Bogard Uchiha
Ha nwere ike iji klọm chrome nwee ike iji ya na TV ma ha nwere ụzọ bara uru karị iji hụ ya, ngwà ahụ dị mma na ekwentị
Jose Alberto Moya Picado dijo
Ikekwe ha ga-agwa m na aghọtaghị m, ma abụ m onye dị afọ 68; ya bu, nke ato. Aghọtaghị m ọtụtụ ihe a, mana ihe m chọrọ ịjụ bụ na enwere ike itinye ngwa a na PC ee ma ọ bụ ee. Enweela m ya na gam akporo m ma ọ bụ ngwa kachasị mma, ọkachasị ịhụ Beins Sport nke na-enye egwuregwu niile na Spain doro anya na enweghị nkwụsị.
Ọzọ ọtụtụ na nwute maka alo ahụ. M kwughachiri, enwere m ike itinye ya na PC m. Daalụ. Atụrụ m anya na ha ga-aza m.
Zaghachi José Alberto Moya Picado
maka Jose Alberto Moya, azịza ya bụ ee, mana nke mbụ ị ga-etinyerịrị ụdị emulator android na windo, enwere ọtụtụ dị ka Nox, wdg, ejirila m Bluestack n'enweghị nsogbu, ọ dabara nke ọma.
Nnọọ! Ajuju ọ ga - ekwe omume ịnyefe onyonyo a site na ekwentị gaa na TV site na Chromecast? Enwere m anya na mmadụ ga-aza m ... Agbalịrị m mana enwere m onyonyo oyi kpọnwụrụ na ihu igwe TV Mega ... ana m ekele gị nke ukwuu!
Ndewo, magburu onwe ya, a na-ahụ ngwa ahụ nke ọma na nghọta doro anya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọwa niile sitere hbo ruo ihe niile kacha mara amara na nke kachasị mkpa na-enweghị akwụ ụgwọ ha uba na ụlọ ọrụ nke cbles directv wdg. Ha ga-eme otu ihe ahụ ma degharịa mgbaàmà ahụ wee kwupụta ya hehe
M na-eji ya mgbe niile na-enweghị nsogbu, ekele ndị mmepe.
Achọrọ m ịma ma enwere ngwa ngwa Mega Tv maka iPhone 6
Wepu na playstore
Ọ gaghị ekwe ka m budata ya. Ahụghị ihe ahụ. Gịnị ka ị ga-eme?
Ihe mere ngwa igwe egwu nke tv nke na adighi na gogle play storet
Zaghachi Manuel marquez perera
Jorge Bernal bụ onye mbụ dijo
Anaghị m ebugote ọwa na url oneplay.tv egosiri na njehie ejikọtaghị njikọ ahụ n'ụzọ ziri ezi, mechie ma mepee ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ị nọgide na-enwe nsogbu gaa facebook otu ma ọ bụ nyochaa njikọ gị
Zaghachi Jorge Bernal
No gaghịzi enwe square iji hụ ya na cromecash
Alexander romero dijo
Nke a bụ azịza ịnwe igwe onyonyo, ihe nkiri na ndị ọzọ n'efu. na-eso njikọ ahụ
Zaghachi Alejandro Romero
Ekele, esi m Ekwedọọ, mmadụ enwere ike inyere m aka ma ọ bụ gwa m otu esi esi enweta ọwa Ecuador ebe m nwetara ekele ekele
Zaghachi Luis m
mu onwem dijo
Mmasị ọwa ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ọnụọgụ nke mmemme abụọ ha na-etinye, mgbe ụfọdụ ha na-agbago ya okpukpu anọ, na n'elu ya niile (Amaara m na ha na-akwado mgbasa ozi) mana itinye nkeji iri abụọ nke mgbasa ozi yiri ka ọ karịrị m oke. N'ezie, site n'ịgbanwe ọwa, nsogbu ahụ edozila.
Zaa onwe m
Gaghịzi enwe igbe iji hụ ya na cromecash.
Akụkọ mara mma. Daalụ maka àgwà na ozi bara uru.
Zaghachi GBWhatsapp 2022
Nweta ọtụtụ ihe na ama gị na egwuregwu ndị a dị jụụ gam akporo
Ngwa kachasị mma maka igwefoto Nikon gị